SEKOLY MIARAMILA ANTSIRABE Namoaka Manamboninahitra lefitra miisa 124 « ESOS III » – Free News
Haparitaka an-kianja avy hatrany ireto Manamboninahitra lefitra vao navoaka
Accueil/Songadim-baovao/SEKOLY MIARAMILA ANTSIRABE Namoaka Manamboninahitra lefitra miisa 124 « ESOS III »
SEKOLY MIARAMILA ANTSIRABE Namoaka Manamboninahitra lefitra miisa 124 « ESOS III »
Namoaka andiany manokana fahatelo miisa 124 ny Sekolim-pirenen'ny Manamboninahitra lefitry ny Tafika Malagasy (ENSOA) Antsirabe. Nomarihana omaly, tany an-toerana ny fahavitan’ny fiofanan’ireo mpianatra Manamboninahitra manokana (Elèves Sous-Officiers Spéciaux ESOS) ireo, izay mitondra ny andiany « Vanja ». Hiatrika ny fanovan-drafitra avy hatrany ireto andiany vao nivoaka ireto…
Stanislas R. il y a 2 semaines
Rehefa novolavolaina sy nohetsehina ireo Manamboninahitra lefitra vao nivoaka, dia hita fa mendrika ny hahazo galona mifanaraka amin’izany, dia ny « Sergent ». Nambaran’ny Jeneraly lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika malagasy, Sahivelo Lala Monja Delphin, fa mitaky fahalalana sy fahaiza-manao ny asa aman’andraikitra sy iraka ampanaovina azy ireo eny an-kianja, ary izany indrindra no hanomezana azy iro singa rehetra ilainy hanatanterahany izany. Miara-dia sy miombon-kevitra tanteraka amin’ny Fitondram-panjakana amin’ny fanatanterahana ny velirano voalohany napetraky ny Filoha ny tafika, hahatonga ny fandriam-pahalemana sy filaminam-bahoaka ho laharam-pahamehana hatrany. Ny fiofanana hiakarana manamboninahitra lefitra no vita, fa ny dingana hiatrehana asa eo anatrehan’ny fanovan-drafitry ny tafika dia mitohy sy hihamafy. Fantatra, fa ny fahaiza-manaon’ny miaramila eny an-tsehatra no antoka sy fototra voalohany hahatanterahan’izany, ary voalohany amin’izany ireo Manamboninahitra lefitra. « Misikina fahavononana, alao hery, aoka ho taratry ny fitsipika sy fahamendrehana anatin’ny tontolon’ny asa sy fanompoam-pirenena, ary ny amin’ny fiarahamonina ianareo », nitso-drano azy ireo ny lehiben’ny Etamazaoron’ny tafika.
Nofanina manokana ireo andiany ESOS III…
Miavaka ireto andiany nivoaka ho manamboninahitra lefitra avy amin’ny sekolim-pirenen’ny manamboninahitra lefitra ao Antsirabe, ireto. Fantatra, fa tamin’ny taon-dasa dia nanapa-kevitra ny tompon’andraikitra teo anivon’ny Tafika, fa handray fanofanana fototra (ESOS III), raha efa nisy ny andiany voalohany sy faharoa. Saingy noho ny toe-javanisy teto amin’ny firenena no nampiatoana izany, ary naverina taty aoriana kely. Herin-taona sy telo herinandro no nanofanana ireo manamboninahitra lefitra vao navoaka, ary anisany mampiavaka azy ireo ny sivana entina miofana tao amin’ny sekoly. Tsy misy latsaky ny diplaoma « Bacc+2 » sy « Bacc+5 » ireo vao nivoaka. Novaina koa ny fomba nanofanana azy ireo, teo amin’ny lafiny « tactique » sy teknika. Tanjona ny hanatsarana ny kalitaon’ireo manamboninahitra lefitra eo anivon’ny tafika, izay andry sy fototra ijoroan’ny Tafika malagasy. Nambaran’ny Kaomandin’ny ENSOA Antsirabe, Colonel Ratsarahevitra Andriamisetra, fa anisany miandry ireto andiany vaovao ireto ny fanovan-drafitry ny tafika izay mizotra hatrany amin’izao fotoana. Eo ny hametrahana azy ireo eny an-tsehatra samihafa, fa eo koa ny hampidirana azy ireo tsirairay handrafitra ireo rafitra vaovao avy amin’ny fanovana atao io. Nanomboka ny talata lasa teo io lanonam-pamoahana manamboninahitra lefitra ESOS III io, izay natomboka tamin’ny fanompoam-pivavahana sy fizarana loka ho an’ireo mpianatrasa mendrika indrindra. Nisy koa ny fanolorana mari-pahalalana avy amin’ny Alliance Française, ary ny fikambanan’ny Mpikabary.
RAZANAMAHASOA CHRISTINE: “Miasa ny Fanjakana ankehitriny, tsy misy intsony ny distrika adino”
CLUB FANORO: Sehatra hifanofanana ho olom-pirenena vanona
RAHARAHA APOLLO 21: Hirosoana ny fanadihadiana lalina an’i Paul Rafanoharana sy ny vadiny anio